समृद्धिको आधार अग्र्यानिक कृषि | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / समृद्धिको आधार अग्र्यानिक कृषि
समृद्धिको आधार अग्र्यानिक कृषि
Posted by: युगबोध in विचार April 16, 2018	0 90 Views
आजभो लि दिनहु संघीय सर कार दे खि प्रान्त हु‘दै स् थानीय सर कार सम्मले समृद्धिको कुर ा उठाइर हे का छन् । सपना दे ख्न सजिलो हुन्छ । तर विपनामा लागु गर्न साह्रै कठिन हुन्छ । यस् तै गर ी भाषण गर्न सजिलो हुन्छ । तर व्यवहार मा लागु गर्न साह्रै मिहे नत गर्नुपर्छ । भनिन्छ– काम गनेर् ले हल्ला गदैर् न, हल्ला गनेर् ले काम गदैर् न । अहिले का सर कार हरु सपना ठूला–ठूला दे ख्छन् र त्यसै अनुरुप भाषण पनि खुबै छा“ट्छन् । अझ हल्ला गर्न त विश्व र े कर्ड नै तो ड्ने भए ।
स् थानीय सर कार बने को एक वर्ष बितिसक्यो उपलब्धि भने को े जनताबाट चकोर् कर उठाउने मात्र दे खियो  । दे शको बजे ट ने ता, मन्त्री र तिनका आसे पासे हरु पाल्न अनि उनीहरुलाई विकासका नाममा मस्ती गर ाउनमै सकिएला जस् तो छ । अहिले को संर चना यस् तो भयो कि नखाउ“ भने दिनभरि को शिकार खाउ“ भने कान्छो बाउको अनुहार भने जस् तो ने पाली जनतालाई भयो  । स् थानीय सर कार त जसर ी हुन्छ बजे ट बढाउने खे लमा लागे जस् तो दे खिन्छ । पर्यावर ण त भाषण गनेर् र विदे शीस“ग बजे ट माग्ने माध्यम जस् तो मात्र भयो  ।
आजभो लि दाङका सबै क्रसर उद्यो गहरुले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको पहाड उठाएका छन् । भो लि वन र वन्यजन्तुको हालत पनि यस् तै हो ला । कर बढी उठ्ने भएपछि जथाभावीरुपमा प्रदूषित उद्यो गहरुलाई स् वीकृति दिने हो लान् । प्रदूषण मन्दविष भएको ले जनतालाई खासै चासो छै न । यसको फाइदा खुबै उठाउने भए । भर्खर ै वन तथा वातावर ण मन्त्रीले वनलाई विकासविर ो धी बन्न दिने छै न भने को सुनियो  । अहिले वन तथा वातावर ण मन्त्रालय एउटै बने को छ । त्यसै ले भन्न सक्नुपनेर् थियो जथाभावी गरि ने र ाष्ट्रिय महत्वको दिगो विकासमा वन तथा वातावर ण मन्त्रालय बाधक बन्ने छै न । भो लि स् थानीय सर कार हरुले कथित वै ज्ञानिक वन व्यवस् थापनका नाममा धमाधम वनका ठूला रुख काट्ने छन् । अरु दे शमा मानव निर्मित वनको व्यवस् थापन गर्छन् हो ला । हामीकहा“ त प्राकृतिक वनको व्यवस् थापन हुने हो  । कतिपय चर ाहरु ठूला–ठूला खास प्रजातिका रुखहरुमा मात्र ग“ुढ बनाउ“छन् । कतिपय बुढा रुखहरुमा सुनाखर ीजस् ता महत्वपूर्ण वनस् पतिदे खि कै यन प्रजातिका झ्याउहरुको आधार स्थल बने का हुन्छन् । अझ काठफो र चर ाले सुके को रुखमा दुलो बनाएर आफ्नो गुढ बनाउ“छ । उसले त्यो ग“ुड एकपटक मात्र प्रयो ग गर्छ । त्यसपछि त्यो ग“ुड प्रयो ग गनेर् अन्य प्रजातिका प्राणी हुन्छन् । त्यसै ले प्राकृतिक वन जै विक विविधताका लागि महत्वपूर्ण क्षे त्र मानिएको हो  ।
मानवको सुस् वास् थ्य, दीर्घजीवनदे खि अस् ितत्वको निम्ति जै विक विविधताको महत्वपूर्ण दे न हुन्छ । अहिले का कथित विकासवादीहरुले यतातिर सो चे को दे खिदै न । उनीहरुको सो च के वल पै सामा मात्र छ । जै विक विविधताको संर क्षण मानव विकास र अस् ितत्वको लागि हो भन्ने तिर पटक्कै बुझे को दे खिदै न ।
हाम्रो मुलुक कृषिप्रधान मुलुक हो । तर यस्तो भन्न पनि लाज लाग्ने भइसक्यो  । कृषिप्रधान दे शले अर वौ ं रुपै या“को खाद्यबाली विदे शबाट मगाउनुपनेर् हुन्छ । यहा“सम्म कि धनिया“का पातसम्म पनि विदे शमा निर्भर हुनुपर े को छ । खाद्यान्नमा मात्र हो इन फलफूल, माछामासु, दूध र तर कार ीसमे त विदे शबाट ल्याउनुपर े को छ । तै पनि हाम्रो सर कार र ने ताहरुले कत्ति पनि लाज नमाने र दिनहु“ कृषिजन्य उत्पादनहरुको बृद्धि गर ाउने भने र भाषण गर्छन् । के ही बजे ट पनि हत्याउ“छन् । तर किसानसम्म आइपुग्दै न । किसानका नाममा आफ्नै कार्यकर्तामा सिध्याउछन् ।
उत्पादन बढाउन भने र र ासायनिक मल र कीटनाशक औ षधि प्रयो ग गर्न शुरुमा किसानलाई आग्रह ग¥यो  । किसानले पनि खे तबार ीको माटो को अवस् था कस् तो छ भने र थाहा पाएनन् । सिकाउने निकाय पनि भएन । त्यसै ले र ासायनिक मल (युरि या र डिएपी) जथाभावी खे तबार ीमा प्रयो ग गर े । जसले गर्दा वषेर् नि मलको मात्रा बढाउनुपनेर् अवस् था सिर्जना भयो  । परि णाम उत्पादनभन्दा लागत बढी लाग्न गयो  । यसले गर्दा खे तीपातीप्रति किसानको मो हभंग भइ विदे शिने क्रम बढ्न थाल्यो  ।
र ासायनिक मल र कीटनाशक औ षधिबाट उत्पादित खाद्यान्न मन्दविष हुन्छ भन्ने कुर ा विज्ञलाई त थाहा भएन अनि किसानलाई झन थाहा हुने कुर ै भएन । परि णाम आज मानव स् वास् थ्य कमजो र र र ो गी बन्दै गइर हे को छ । यति मात्र हो इन, अझ खतर नाक कुर ो त माटो नै बञ्जड (रुखो ) बन्न पुग्यो  । अर्थात निर्जीव भए पनि माटो को मृत्यु हुन पुग्यो भन्दा पनि हुन्छ । कीटनाशक औ षधि र र ासायनिक मलले कृषि बालीका मित्रजीवहरु नष्ट हुन पुगे अनि शत्रुजीवको बृद्धि हु“दै गइर हे को छ । यसतर्फ हाम्रा सर कार हरुले पटक्कै चासो र ाखे को दे खिदै न । अनि कृषिसम्बन्धी भाषण छा“ट्दै मा कृषिजन्य उत्पादन बढ्ने कुर ै भएन । त्यसै ले समृद्धिको नार ा के वल जनतालाई ढा“ट्ने बाहेक अरु के ही हो इन भन्दा हुन्छ । हाम्रा सर कार हरु र कर्मचार ीतन्त्रमा जनता र मुलुकप्रति जवाफदे ही बन्ने चे तना जबसम्म पलाउ“दै न तबसम्म के ही हुने वाला छै न ।
अब सा“च्चै मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर गर ाउने हो भने हाम्रो कृषि नीति र काम गनेर् शै लीमा आमूल परि वर्तन गर्नुपर्दछ । वास् तविक किसानलाई र ाहतको प्याके ज दिनुपर्दछ । उत्पादित कृषिजन्य वस् तुको उचित मूल्य दिन सक्नुपर्दछ । अहिले दुःख गनेर् किसान, नाफा खाने विचौ लिया हु“दा जनताले महंगो मा खाद्यवाली किन्नु परि र हे को छ । किसानले मूल्य नै पाउ“दै नन् । यो परि पाटीको अन्त्य गर ाउन चा“डै नीति बनाएर सर कार अगाडि बढ्नुपर्दछ । अब किसानलाई अग्र्यानिक खे तीतिर आकर्षित गर ाउन ढिला गर्नुहु“दै न । यसको निम्ति कम्पो ष्ट मल, पशु मल, गड्यौ ला मल र जै विक मलतिर आकर्षित गर ाएर माटो लाई जीवित अर्थात उर्वर बनाउनतिर सर कार लाग्नुपर्दछ । अग्र्यानिक खे ती गनेर् किसानहरुलाई तत्काल सर कार ले र ाहतको प्याके ज घो षणा गर्नुपर्दछ ।
अग्र्यानिक उत्पादनको बजार सुनिश्चित गरि दिनुपर्दछ । यसले एकातिर जनताले स् वच्छ र स् वादिलो खाद्यबाली खान पाउने , अकोर् तिर माटो को उर्वर शक्ति बढे र जाने हुन्छ । यसले गर्दा कम लागतमा बढी उत्पादन हुन गयो भने पुनः किसान कृषि कार्यमा फर्कन सक्छन् । विदे श जाने युवाशक्ति स् वदे शमै स् वर ो जगार बन्न सक्छन् । हाम्रा सर कार हरु यसतर्फ काम गर्न अग्रसर हो लान् ?
गत चै त २७ गते घो र ाही उपमहानगर पालिकाको वडा नं. १ र २ मा पनेर् बुकाका अगुवा किसानहरुको भे लाले चे पे खो लादे खि पूर्व, चुर े खो लादे खि पश्चिम, चरि ¨े सामुदायिक वनदे खि दक्षिण, बबईदे खि उत्तर का भूभागलाई अग्र्यानिक पके ट एरि या बनाउन घो र ाही उपमहानगर पालिकालाई अनुर ो ध गदैर् सहयो गको लागि निर्णय गर ी पठाएका छन् । उक्त क्षे त्रलाई जिल्लाकै पहिलो अग्र्यानिक नमूना खे तीको पके ट एरि या बनाएर नगर पालिकाले किसानलाई आर्थिक सहयो गको प्याके ज बनाएर दिनुपर्छ र कृषि विशे षज्ञलाई खटाउनुपर्दछ । उक्त क्षे त्रलाई कृषि पर्यटक भिœयाउने उद्दे श्यले काम गर े त्यहा“ बसो बास गनेर् दुई सय ४० घर किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने थिए भने जिल्लाबासीले कम्तिमा स् वच्छ र स् वादिलो तर कार ी खाने पाउने थिए । हे र ौ ं दाङमा अग्र्यानिक खे ती गनेर् भने र किसानले माग गर े का छन् । स् थानीय सर कार , प्रादे शिक सर कार र संघीय सर कार ले के गर्दछन् ?
संघीय सर कार ले अग्र्यानिक खे तीमा जो ड दिने भाषण गदैर् छ । घो र ाही उपमहानगर पालिकाका प्रमुख पनि सकार ात्मक हुनुभएको छ । कृषिको बजे ट अहिले छर े र नदिदा र ाम्रो हो ला । बरु अग्र्यानिक पके ट एरि यामा लगाउ“दा र ाम्रो हो ला । जसले गर्दा दे शभर बाट कृषिपर्यटक आउन र जिल्लाका सबै किसानले अनुसर ण गर्न सकून् । अहिले र ासायनिक मल प्रयो ग नगर े उत्पादन हु“दै न भन्ने भ्रम चिर्नु छ । अग्र्यानिक र जै विक मलद्वार ा प्रशस् त उत्पादन गर ाउन सकिन्छ । बुकामा पर्यावर णीय दिगो विकास एवं अनुसन्धान के न्द्रको प्रो जे क्ट छ । त्यसै ले नगर पालिकास“ग मिले र काम गर्न पाए अवश्य सफल हुने थियो र दाङकै नमूना काम हुने थियो  ।
जनता जागरुक भएको बे ला सर कार सक्रिय भएपछि सफलता अवश्य पाइने थियो  । अहिले गनेर् भने को जनतास“ग साझे दार ी हो  । शुरुमा लगानी नगर पालिका र संस् थाले लगाउने , मे हे नत किसानले गनेर् हो भने अवश्य सफल भइन्छ । त्यहा“ उत्पादित अग्र्यानिक तर कार ीको बजार व्यवस् थापन अलग्गै गरि यो भने जनता पनि निर्धक्क भएर अग्र्यानिक तर कार ी खान पाउने थिए । मन्दविषयुक्त तर कार ी खानुभन्दा केही रुपै या“ बढी मूल्य हाले र सचे त जनता खान तयार हुन्छन् । केही वर्ष सबै ले किसानलाई साथ दिएमा पछि जिल्लाभरि नै लहर चल्ने थियो  ।
तुलसीपुर उपमहानगर पालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे ले हामीकहा“ अग्र्यानिक कृषि प्रो जे क्ट ल्याउनुस् । हामी लगानी लगाउन तयार छौ ं भन्नुभएको छ । यो अभियानमा घो र ाही पनि सकार ात्मक छ । त्यसै ले भविष्यमा जिल्लालाई नै अग्र्यानिक बनाउने अभियानमा सबै लागिपर ौ ं । र ासायनिक मल र विषादीमा वषेर् नि अर बौ ं र कम विदे शिने गर े को छ । त्यसलाई र ो क्न सके मुुलुकले विकासमा एक कदम फड्को मार्न सक्ने छ । हे र ौ ं सर कार हरु कत्तिको सक्रियरुपमा लागिपर्छन् । अग्र्यानिक कृषि उत्पादनले नै समृद्धिको ढो का खो ल्न सक्छ भन्ने कुर ा सबै ले बुझे सफलता अवश्य मिल्ने छ ।
Previous: परदेशबाट गाउँँ आएका युवाहरु
Next: रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षको सन्देश
विकास र समृद्धिका लागि स्मार्ट चरित्र
घोराही उपमहानगरपालिकाको पूर्वाधार विकास र चक्रपथ
गिद्ध संरक्षणमा नेपाल सरकार र सरोकारवालाको भूमिका